Shiinaha daabacaadda daabacaadda daabacaadda daabacaadda shaashadda faaruqda ah iyo soosaarayaasha | Himilada
Ka caawi kooxdaada inay ahaato mid qabow oo ka dhex muuqda qaabkan waxqabadka tayo sare leh. Kufiican kooxaha isboortiga iyo ururada raadinaya shaati tayo sare leh.
Kuwani 100% shaati-gacmeedyada yar-yar ee micro-polyester-ka ah waxaa laga sameeyaa dharka waxqabadka farsamada ugu fiican, dhinacyada ka soo horjeedka ah iyo waxyaabaha gacmaha lagu dhejiyo. Loogu talagalay iyada oo silsilad isku xidha dharka iyo laba-cirbad cirbad leh taako.
Ka caawi kooxdaada inay ahaato mid qabow oo ka dhex muuqda qaabkan waxqabadka tayo sare leh. Kufiican kooxaha isboortiga iyo ururada raadinaya shaati tayo sare leh. Ma jiro qof aan jeclaan doonin Shaashadan!
Hore: caadadii daabacaadda shaashadda caadigaa ma jiro niman jilicsan oo aasaasi ah qoorta qoorta heather midab saddex-isku-dhaf ah funaanad t
Ragga T Shirt Cotton
caadadii neefsashada 100% wickin qoyaan caag ah ...